Japanese kaadị investors ike ihu 55% tax on uru - Blockchain News
Japanese kaadị investors ike ihu 55% tax on uru
Japan si National Tax Agency chịrị afọ ikpeazụ na isi obodo uru on cryptocurrency trades na-a ụdị “iche ego,” investors na-now chọrọ ikwusa ha uru na-enwe kwa afọ tax filings ruru Feb. 16-March 15.
N'adịghị ka winnings na ebuka na mba ọzọ ego, nke na-ụtụ isi gburugburu 20 percent, Japan si chepụtara echiche na uru site kwalite asụsụ ọma na ego na-agba si 15 percent ka 55 percent. The top ego na-emetụta ndị na-enwe kwa afọ-enwetakwa nke 40 nde yen ($365,000).
Na-enweghị isi obodo uru tax on ogologo oge investments na mebere ego na ụfọdụ meworonụ tinyere Singapore, a njuaka cryptocurrency-ọgaranya investors ugbua ekpe Japan, kwuru Kengo Maekawa, Onyeisi nke Shiodome Partners Tax Corp.
The revenue-azụ nwere maka Japanese ọchịchị nwere ike ịbụ ịrịba. Na-adịbeghị anya ọnwa banyere 40 percent nke niile trading na Bitcoin kemgbe megide yen.
Ma ugbu a, na tax gị n'ụlọnga na-eke a data isi na cryptocurrency investors na ìgwè dabere na Tokyo na Osaka na-ịnọgide na-enwe a nso nche electronic trading.
First Bitcoin Ngwuputa ụlọ ọrụ depụtara na Tel Aviv ngwaahịa mgbanwe
Previous Post:Thailand si ego ozi: Government agaghị machibido cryptocurrency trading
Next Post:Cryptocurrency mgbanwe BitGrail ọkwa insolvency mgbe hack
Olee otú otu ịkọ omume nke na ọnụego nke a cryptocurrency na okwu nke ọnụ ọgụgụ nke iwu enịm?
Gịnị bụ ọdịdị nke usoro nke ịzụ ma ọ bụ na-ere a
Popularity cryptocurrencies, ruru dị akpịrịkpa, na na nnọọ umengwụ ma ọ bụ nnọọ
bitcoin na ngọngọ yinye BTC ígwé ojii na Ngwuputa atụle Coinbase kaadị cryptocurrencies cryptocurrency ethereum mgbanwe hardfork ico litecoin ma egwuputa Ngwuputa bụghị netwọk ọhụrụ ozi n'elu ikpo okwu protocol ripple soro telegram iriba-ama tokens trading wallet